China Galvanized Power Angle Tower Tube Tower orinasa sy mpanamboatra | Kejulixin
Fizotry ny zoro galvanised mafana: Fikojakojana zoro → fanasana → famenoana solvent fanosotra fanampiny → fanamainana mialoha → fanantonana mihantona → fampangatsiahana → passivation → fanadiovana → fitotoana → vita ny galvanizing mafana.
Fizotry ny zoro galvanised mafana: Fikojakojana zoro → fanasana → famenoana solvent fanosotra fanampiny → fanamainana mialoha → fanantonana mihantona → fampangatsiahana → passivation → fanadiovana → fitotoana → vita ny galvanizing mafana. Ny sosona galvanized amin'ny zoro galvanized mafana dia ny hatevin'ny fanamiana, hatramin'ny 30-50um, miaraka amin'ny fahamendrehana tsara. Ny sosona galvanized dia metallurgically mifamatotra amin'ny vy ary lasa ampahany amin'ny vy ambonin'ny, noho izany dia azo itokisana kokoa ny faharetan'ny galvanized sosona ny mafana-dip galvanized zoro.
1. Ny vidin'ny fanodinana ambany: ny vidin'ny galvanizing mafana ho an'ny fisorohana ny harafesina dia ambany noho ny an'ny loko hafa.
2. mateza: Hot-dip galvanized zoro manana glossy ambonin'ny, fanamiana zinc coating, tsy misy leakage, tsy mitete, mafy adhesion ary avo harafesina fanoherana. Ao amin'ny tontolo ambanivohitra, ny hatevin'ny fiarovana ny harafesina mafana dia azo tazonina mandritra ny 50 taona mahery tsy misy fanamboarana; Any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe na any ivelany, ny sosona fiarovana amin'ny harafesina mafana dia azo tazomina mandritra ny 20 taona tsy misy fanamboarana.
3. Azo itokisana tsara: ny sosona galvanized dia metallurgically mifamatotra amin'ny vy ary lasa ampahany amin'ny vy ambonin'ny, noho izany dia azo antoka kokoa ny faharetan'ny coating.
4, ny hamafin'ny coating: ny galvanized sosona mamorona metallurgical rafitra manokana izay mahatohitra mekanika fahasimbana mandritra ny fitaterana sy ny fampiasana.
5. Fiarovana feno: ny ampahany rehetra amin'ny ampahany voapetaka dia azo rakofana amin'ny zinc, na dia ao anaty fahaketrahana, zoro maranitra ary toerana miafina aza.
6. Ny fotoana sy ny asa famonjena: ny galvanizing dingana dia haingana kokoa noho ny hafa coating fomba fanorenana ary misoroka ny fotoana ilaina hoso-doko eo amin'ny toerana aorian'ny fametrahana.
teo aloha: Grid Steel Structure Made In Chine
Manaraka: Orinasa Rafitra vy avo lenta
tilikambo elektrika tafo
tilikambo metaly tafo
tilikambo vy tafo
Power Steel Tower
Tavoahangy Cable Galvanized kalitao avo lenta